Mu'asasada 'McKnight Foundation' waxay raadinaysaa maamule khibrad leh oo dhanka isgaarsiinta ah si ay nooga caawiso inaan xoojino awooda isgaarsiinta istiraatiijiyadeed si aan u hormarino howlgalka Mu'asasada iyo yoolalka barnaamijkeena Qofkani wuxuu ku soo biiri doonaa waqti muhiim ah taariikhda aasaaska si uu gacan uga geysto jihada cusub ee istiraatiijiyadeed ee xiisaha leh, oo salka ku haysa qiyamka iyo qaababka lagu qeexay our Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah. Sida duuliyaha casriga ah ee cilmiga deegaanka dijitaalka ah, wakiil firfircoon oo taxaddar leh ee xiriirada aaminka ah, iyo helitaanka xalka joogtada ah, qofkani wuxuu heli doonaa fursad uu kula shaqeeyo iskaashi lala yeesho agaasimaha isgaarsiinta iyo asxaabta kale si kor loogu qaado shaqada waaxda bulshada ugu badan. saamaynta. Marka la eego kuwayaga cusub wareejinta isweydaarsiga, kooxdu waxay soo bandhigi doontaa latalin istiraatiiji ah oo dheeraad ah iyo taakuleyn dil toogasho ah si loo hormariyo himilooyinkeena barnaamijka weyn, iyadoo la sii wado heerarka sare ee hay'adda ee saameynta kalsoonida wanaagsan. Intaas waxaa sii dheer, kooxdayada isgaarsiinta nimble waxay gacan ka geystaan ballanqaadyada Foundation ee daahfurnaanta, wadaagida aqoonta, hoggaaminta fikirka, iyo dowlad wanaagga.
Maamulaha isgaadhsiinta ayaa ku biirin doona aasaaska qoyska gaarka loo leeyahay oo leh dhaqan ku saleysan himilo iyo iskaashi sare. Shaqaalaha McKnight waxay qaadanayaan shaqo macno leh, shaqo adag waxayna helayaan faa'iidooyin aad u wanaagsan, oo ay ku jiraan fursadaha horumarinta xirfadeed iyo barashada socota. Qofkani wuxuu ka shaqeyn doonaa koox afarta qof ah sidoo kale wuxuu maareyn doonaa shirkadaha ka baxsan iyo kuwa iskood u shaqeysta.
Fadlan la soco in dalabkaagu uu ka kooban yahay saddex muunad oo qoraal ah iyo jawaabaha saddex su'aalood oo gaar ah oo ay weheliso CV-gaaga iyo warqadda daboolka. Faahfaahin dheeraad ah, ka eeg shuruudaha gudbinta sanduuqa cawlan ee ku dhow dhammaadka dhammaadka shaqadan dhajinta.
Aagagga Muhiimka ah ee Mas'uuliyadda
Taageer baahiyaha isgaarsiinta dibada ee kala duwan ee ururka oo dhan, oo ay kujirto jihada hay'ad samafalka ee dhowaan lagu dhawaaqay.
Ilaali howlaha tifaftirka ee aaladeena dhijitaalka ah, oo ay ku jiraan websaydhkeena, emaylka, xisaabaadka warbaahinta bulshada, iyo sidoo kale goobaha saddexaad ee aan ku leennahay astaan shirkadeed.
Maareeya xiriirka warbaahinta, la socodka arrimaha, iyo wakiilnimada sumadda.
Si dhakhso leh uga jawaab codsiyada dibadda ee deeq bixiyaasha, wariyeyaasha, iyo daneeyayaasha kale.
Bixi la-talin istiraatiijiyadeed oo fuliya istiraatiijiyad sheeko oo dhista rabitaanka dadweynaha iyo taageeridda barnaamijyadeenna, gaar ahaan barnaamijkeena ballaarinta ee Cimilada & Tamarta Midwest iyo a barnaamij soo baxaya si loo dhiso Minnesota loo wada siman yahay oo loo dhan yahay.
Ku taageer guddiga iyo hoggaanka sare dadaallada hay'adaha kala duwan, oo ay ku jiraan mashaariicda gudaha iyo soo bandhigidda maamulka guddiga iyo agabyada.
Kala tasho agaasimaha isgaarsiinta qorsheynta isgaarsiinta, siyaasadaha, tilmaamaha, hagaajinta hanaanka, iyo ilaha shaqaalaha.
Xirfadaha qoraalka iyo qoraalka tafatiran si loo diyaariyo ama loo kormeero waxyaabo fara badan oo isgaarsiineed, oo ay kujiraan ogeysiisyo dadweyne, warbixinno, xusuus-qoryo gudaha ah, khudbado, xog-isweydaarsiyo, fiidiyowyo, iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay warbaahinta bulshada.
Khibrad khibrad iyo xikmad leh oo ku dheehantahay dhaqdhaqaaq firfircoon, xasaasi ah, shaqooyin heer sare ah leh daneeyayaal badan iyo aragtiyo kaladuwan.
Faham hor leh oo ku saabsan sida ugu wanaagsan ee loo socodsiin karo uguna kabto xawliga isbeddelka dabiiciga ah ee dijitaalka, oo ay kujirto karti u yeelista sheeko-wadaagista muuqaalka, falanqaynta xogta isticmaaleyaasha, iyo isbeddelada teknolojiyadda warbaahinta ee soo ifbaxay.
Maareeye mashruuc oo taxadar leh, oo si faahfaahsan u jihaysan oo u dhaqaajin kara himilooyinka hore qaab iskaashi iyo waxtar leh.
Xirfadaha falanqaynta ee adag si loo horumariyo qorshayaasha isgaarsiinta ee fikirka leh, saameyn-ku-saleysan leh ee garashada dhagaystayaasha iyo baahiyaha farriinta.
Fahan casri ah oo ku saabsan bulshada, dhaqaalaha, iyo nidaamyada siyaasadeed iyo doorka isgaarsiinta ee saameynta fahamka dhaqanka, xaaladaha suuqa, iyo natiijooyinka siyaasada dadweynaha.
Diyaar u noqoshada qaadashada fursado cusub iyo caqabado leh dareen deg deg ah iyo tamar wanaagsan.
Kartida dhaqameed sare si wax ku ool ah uga shaqeyso iskaashi lala yeesho bulshooyinka kaladuwan, oo ay kujirto qadarinta duruufaha taariikheed, garashada heerka xiriirka iyo dhaqdhaqaaqa awooda, iyo fahanka qoto dheer ee bulshada, isirka, iyo kala duwanaanshaha qowmiyadeed.
Asalka mid ka mid ah aagagga maalgelinta ugu waaweyn, sida isgaarsiinta deegaanka, ayaa si weyn loo doonayaa.
Waxbarasho iyo Khibrad Loogu Baahan Yahay
Shahaadada koowaad ee jaamacadeed iyo ugu yaraan toddobo sano xagga isgaarsiinta, xiriirka dadweynaha, suuq geynta, howlaha guud, ama qeyb kale oo laxiriirta heer maamul, ama isku dhafan khibrad u dhiganta iyo tababar.
Mowqifku wuxuu xidhan yahay 18ka Diseembar 18, 2019. Fadlan akhri shuruudaha soo gudbinta ee hoos ku xusan ka dibna dalbo.
Shuruudaha Soo Gudbinta Codsiga
Marka lagu daro gudbinta CV-gaaga iyo warqadda daboolka ah, fadlan 1) soo gudbi saddex tijaabo oo qoraal ah iyo 2) ka jawaab saddexda su'aalood ee hoos ku xusan. In kasta oo aanu jirin xaddidan erey oo xadidan, hadana waxaan kugula talineynaa jawaabaha in aan ka badnayn 300 erey su'aal kasta.
Noosheeg qorshe isgaarsiineed oo aad dhowaan sameysay iyo habka aad u adeegsaneyso mudnaanta koowaad ee yoolalka, dhagaystayaasha, iyo farriimaha.
Waa maxay hal abuurka cusub ee dhijitaalka ah ama isbeddellada aad isha ku hayso? Sidee xiriiriyaha isuduwaha dadweynaha u hormarin karaa shaqadooda isagoo adeegsanaya hal-abuurnimo cusub ama isbeddelkan?
La wadaag tusaale ahaan waqtiga ay shaqooyinka isgaarsiintaadu gacan ka geysteen saameyn bulsho oo togan. Maxaad casharro ah baratay oo laga yaabo in lagu dabaqi karo doorkan cusub?
Muunadaha qoraalka ahi waxay noqon karaan dherer kasta. Waxay noqon karaan kuwo la soo saari karo maqaallo, xusuus-qoris gudaha ah, qorshayaasha isgaarsiinta, khudbadaha, hadalada, iwm. Waxay kaloo noqon karaan xiriiriyeyaal websaydh ah, qoraallo fiidiyow ah, ama koonto warbaahinta bulshada aad maamusho.
Xusuusin dheeri ah
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid furitaanka shaqadan, fadlan emayl ku soo dir humanresources@mcknight.org.
Kani waa meel waqti buuxa laga dhaafay oo ku saleysan xafiiskayaga Minneapolis. Xaddiga mushaharku waa qiyaastii $119,000-$125,000.
Mu'asasada 'McKnight Foundation', oo ah aasaaska qoyska ee fadhigoodu yahay Minnesota, ayaa horumariya cadaalad, hal abuur, iyo mustaqbal aad u badan oo dadka iyo meeraha ay ku najaxaan. Waxaa la asaasay 1953, Hay'ada 'McKnight Foundation' waxay si qoto dheer uga go'antahay horumarinta xalalka cimilada ee Midwest, oo loo dhisayo Garsoor loo wada dhan yahay oo loo dhan yahay, laguna taageerayo farshaxanka Minnesota, neuroscience, iyo cilmi baarista dalaga caalamiga ah. Mu'asasada ayaa leh qiyaastii $2.3 bilyan oo hanti ah waxayna ku kacdaa qiyaastii $90 milyan sanadkii.
Xidhan: Diseembar 18, 2019
Fadlan la soco in dalabkaagu uu ka kooban yahay saddex muunad oo qoraal ah iyo jawaabaha saddex su'aalood oo gaar ah oo ay weheliso CV-gaaga iyo warqadda daboolka.